Waxaan kuu soo qaadaneynaa 8 wijito si aad uga faa iideysato macruufka 10 | Wararka IPhone
Sidaad ogtahay, macruufka 10 wuxuu keensaday waxyaabo badan oo cusub, oo ay kujiraan ogeysiisyo hodan ah iyo aalado cusub oo cusub oo loogu talagalay Xarunta Ogeysiinta, qayb si weyn caan uga qaadatay nidaamkan cusub ee mobilada ee ka howlgala shirkadda tufaaxa. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaannaan helin waqti aan ku joogsanno si aan u ogaano waxa ay awooddeeda oo dhan tahay, taasna waxaan ugu jirnaa iPhone News, si aan kuu tusno tabahaas yar iyo fursadaha aad u leedahay iPhone ee aad awood u yeelatay inaad ku baxsato. Waxaan kuu soo qaadan doonnaa wax aan ka yarayn siddeed wijetarro aad u qurux badan oo noloshaada kuu fududeyn doona mahadnaqa macruufka 10.
5 Intee in le'eg ayuu batterigeygu leeyahay Apple Watch?
6 Ku sheekaysiga joogtada ah ee WhatsApp
Lacag iyo waqti ku badbaadi Stocard. Kuwa aan garanayn codsigan cajiibka ah, waa nidaam lagu kaydiyo kaararka daacadnimada ee bakhaarada iyo shirkadaha aan la tirin karin. Stocard waxay haysataa oggolaanshaha ganacsatada u oggolaanaysa inay ku daraan kaararka daacadnimadooda, liistaduna waa mid aan dhammaad lahayn. Laakiin intaas kaliya maahan, sidoo kale waa mid isdhexgal ah, taas oo ah, haddii aan haysanno kaarka Carrefour oo lagu daray, tusaale ahaan, waxaan si toos ah ugala soo xiriiri karnaa Stocard dalabyada noo dhigma iyo in Carrefour uu shakhsi noogu habboon yahay.
Mar dambe kuma sii qaadan doono kaararka daacadnimada jeebkeyga, in ka badan toban ayaan ku hayaa taleefankayga iPhone-ka, maxaad sugeysaa? Hagaag, sidee bay u noqon kartaa si kale, Stocard waxay leedahay wijito aad u fiican oo loogu talagalay Xarunta Ogeysiinta, qalabkan waxaan ku arki karnaa sideed kaar oo hal mar ah, kaliya waa inaan riixnaa waxaana lagu soo bandhigi doonaa shaashadda.
Codsigani wuxuu diiradda saarayaa inuu noogu wargeliyo qaab yar oo wax kasta oo ka dhaca adduunka kubada cagta, haa, wax kastoo aan dooneyno. Ogeysiisyadu waa ku xadidan yihiin doorbidyadeena, barnaamijka Apple Watch iyo ogeysiisyaduna runtii waa wax cajiib ah. Waxaan aad ugu boorinayaa barnaamijkan sidoo kale Widget-keeda, waxay u oggolaaneysaa jaleecada si aad u aragto wararkii ugu dambeeyay ee kooxda kubbada cagta aan ugu jecel nahay, iyo sidoo kale natiijada ugu dambeysa. Waxaan sidoo kale u habeyn karnaa ogeysiisyada ku saleysan tartamada gaarka ah, codsi leh fursado badan oo ka badan inta aan qiyaasi karno oo aan aad ugula taliyo.
Codsigan waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan deegaanka gaadiidka dadweynaha. Magaalooyinka waaweyn sida Madrid runtii si fiican ayey u shaqeysaaMarka la soo koobo, wax tartan ah ma lahan, kaliya waa inaan sheegnaa halka aan joogno iyo halka aan dooneyno inaan tagno si ay u qaabeyso jidadka ugu fiican iyadoo kuxiran nooca gaadiidka dadweynaha ee aan dooneyno, iyadoo naloo sheegayo muddada aan sugeyno iyo inta ay qaadaneyso in la yimaado. Xitaa adeegyada rasmiga ah ee gaadiidka dadweynaha uma shaqeeyaan si wanaagsan, qalabkiisuna wuxuu awood u leeyahay inuu guriga na geeyo ama inuu ku shaqeeyo hal taabasho oo keliya oo aan waqti lumin.
Maxaan kaaga sheegi doonnaa Shazam aadan aqoon. Raadi heestaas nacaladda leh ee ka socota raadiyaha, ee aad jeceshahay, laakiin aadan aqoon magaca. Shazam waxaa lagu dhex daray nidaamka macruufka sida ugu macquulsan, dhab ahaantii waxay la shaqeysaa xitaa Siri, si kastaba ha noqotee, Maxaa ka fudud isticmaalka Shazam Xarunta Wargelinta? Ficil ahaan waxba maahan, taasi waa sababta aan kuu xusuusineyno in Shazam uu leeyahay Widget animation ah oo cajiib ah oo noo oggolaan doona inaan «Shazamear» daqiiqado yar gudahood adoo gujinaya badhanka wareega ee ay bidixda u dhigayaan.
Intee in le'eg ayuu batterigeygu leeyahay Apple Watch?
Waxaa laga yaabaa inaad haysato dhamaan Widget-yada oo kuxiray markii hore adiguna aadan ka war qabin suurtagalnimadaan, laakiin mahadsanid mid ka mid ah macruufka rasmiga ah ee iOS waxaad awoodi doontaa inaad ogaato waxa batteriga ka harsan qalabka aad ku xirtay Bluetooth, ha noqdo Apple-kaaga U fiirso ama sameecadaha sameecadaha, si fudud, fudud oo dhakhso leh.
Ku sheekaysiga joogtada ah ee WhatsApp
Xitaa WhatsApp ayaa ku soo biirtay isbeddelka sheekooyinka soo noqnoqda, oo leh. Waxaan ku dari karnaa Widget oo ina tusaya sheekooyinkii ugu dambeeyay ee aan isticmaalnay. Tani waxay naga badbaadin doontaa waqtiga, maadaama ay sidoo kale na ogeysiinayso isticmaaleha nala hadlay iyo inta farriimo ee ay nooga tageen, haddii ay dhacdo inaadan jeclayn inaad ka jawaabto ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Waxaan kuu keenaynaa 6 wijito si aad uga faa iideysato macruufka 10
Ma jiraa qof garanaya sida loo dhigo widget-ka meesha uu gaarigaagu yaalo Miyay la jaanqaadaysaa bluuutuka gaariga?
Jawaab Luis Manuel lopez Vazquez
cubanitoyesyes 75 dijo
Luis taas darteed waa inaad ku xirtaa fiilo taleefanka ka dibna waxaad si fiican u fureysaa cuuulo oo aad ku xireysaa waxaadna arki doontaa sida wax waliba kuugu sheegaan hahaha
Ku jawaab cubanitoyes 75
Sidoo kale waxaad lahadli kartaa marwadaada duqda ah carsaanyada oo iyadu ha u timaado oo guriga ha ka keento.
Zerodium waxay bixisaa 1,5 Milyan oo Jailbreak Abaalmarin loogu talagalay iOS 10
'Alto's Adventure', waa mid ka mid ah ciyaartii ugu horreysay ee lagu taageerayo mashiinka cusub ee hapiska ee iPhone 7